Farmaajo xitaa waa ka fuqi diiday kaalintiisa musuqa - FIQI | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya – Wasiirkii hore ee amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi, ayaa sheegay in Farmaajo difaacday kaalintiisa ku aaddan boobka 1-aad ee musuqa, kadib markii Soomaaliya noqotay dalka ugu musuq-maasuqa badan dunida.
“Waa ku mahadsan yahay Oday Farmaajo si isku xigta shantii sano inuu xagsaday booskaan, waa lagu yaqaanay meesha uu ku dhego in uusan ka fuqin, kaliya hanaga ilaaliyo markaan inuusan musuq aqoon!” ayuu yiri Fiqi.
Wuxuu sheegay in Kooxda Farmaajo ay mudo ku faaneysay in ay la dagaallameen musuqa, hayeeshee, warbixinnada la xariira wax is-daba-marinta ee soo baxayay muddadii ay talada hayeen ay muujinayaan boob xooggan.
“Wuxuu sheegtaa in uu ka fog yahay ama la dirirayo musuqa, balse si isku xigta 5 sano ayay dunidu ku marqaati kacday, shacabka Soomaaliyeedna ay daawadayaal ka yihiin musuqa xargaha goostay”. Ayuu ku sii daray.
Soomaaliya ayaa mar kale kaalinta koowaad ka gashay liiska dalalka ugu musuq-maasuqa badan caalamka, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Transparency International.
Inkstoo, warbixintii 2019 ee hay’adda Transparency International lagu sheegay in Soomaaliya gashay kaalinta 9-aad ee waddamada ugu musuq maasuqa badan caalamka, balse, waxa ay hadda mar kale ku soo laabatay kaalinta 1aad.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, oo ka mid ah saddex shaqsi oo si weyn uga faanay waxa ay ugu yeereen la dagaallanka musuqa ayaa hore ugu goodiyay inuu maxakamad la kori doono Transparency International.
Dhawaan warbixin ka soo baxday xaafiiska Hanti-dowrka guud, waxaa lagu muujiyay lunsashada malaayiin doolar, kadib baaritaanno lagu sameeyay kaliya 10 haayadood.